नेपाली नारीको यथार्थता,तीज पर्व - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » » नेपाली नारीको यथार्थता,तीज पर्व
नेपाली नारीको यथार्थता,तीज पर्व
बर्षको एक पटक मनाईने हिन्दु पर्व तीजले आम नेपाली नारीहरुको मन छुने गरेको छ । जता हेर्‍यो उतै राता राता सारी ढल्काएर, पहेलै गहना टल्काएर हिड्नेहरुको भिडले पुरुषहरुको मन नलोभ्याए होला भन्न सकिन्न । हेर्नेले त ट्वाल्ल परेर पनि हेरे होलान् । ट्वाल्ल पर्न नचाहनेहरुले पनि लुकीचोरी जसरीतसरी हेन भ्याएका होलान । तर धर्म र सँस्कृति जोगाउने नाममा आडम्बरी समाजले निम्त्याएका तडकभडक जस्ता बिकराल समस्यातिर भने कसैको ध्यान गएको छैन । धार्मिक सँस्कार र आस्थामा रहेर मनाईने तीजलाई समयको मागअनुसार सहि परिर्माजन हुनुपर्नेमा पबित्र धार्मिक सँस्कारमा बिकृति भित्रिएको महसुस भने सहजै गर्न सकिन्छ ।
एकताका निकै नाम चलेकी गायिकाले तीजकै अवसर पारेर “यो पालीको तीजमा त पोइल जान पाम पाम शिव पोईल जान पाम” भन्ने गीत गाएर रातारात चर्चामा आइन । ति गायिकाले तीज पर्वको सहि सदुपयो गरिन या दुरुपयोग गरिन, उनैले जाने होलिन् । हिन्दु धर्मको सम्मान गरिन या अपमान गरिन, त्यो पनि उनैले महसुस गरे होलिन् । प्रसँगबस यदाकदा दिदीबहिनीहरुले पनि त्यहि पोइल जान पाम भन्ने गीतमा नाचेको र रमाएको देख्न पाईयो । तीजमा रमाइलो गर्नको लागि त्यो भन्दा अरु राम्रा, रमाईला र मार्मिक तीजको गीत छैन र ?श्रीमानको नाममा व्रत पनि बस्ने, पोइल जान पाम पाम भन्ने गीत गाउने र नाँच्ने गर्ने ? यस्ता उरेन्थेउला सँस्कारले धर्मको सम्मान र सँस्कृतिको जगेर्ना हुन सक्ला ?
मेरो बिचारमा धुमधामसंग तीज मनाए पूण्य हुने, नमानाए शून्य हुने । तीज मनाए स्वर्ग जाने, नमनाए नर्क जाने भन्ने हैन जस्तो लाग्छ । नियम र बिधिपूर्बक मनाउनेहरुलाई आत्माशान्ति भने पक्कै मिल्छ होला । कसैले तीजलाई प्रेम दिवसको रुपमा पनि हेरेको पाइन्छ त कसैले छोरी चेलीहरुले माईती देश गएर आफुले भोगको दुःख र बेदना पोख्ने पर्व हो भनेका छन ।
जो कोही नारीले मारे पाप पाले पूण्य भनेर सिंगो जीबन कुनै एक पुरुषलाई सुम्पेपछि हरदम हरकदम श्रीमानको भलाई चाहन्छन । जस्को फलस्वरुप तीजमा आफ्नो पतीको सुमति, सुबुद्धी पलाओस भनि साथै सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी पानी पनि नपिई निराहार व्रत बस्छन । तर मर्दको सात वटी भनेर हिड्ने मति नभएका, घरकी अलि छिटै मरे त अर्की ल्याउने थिएं भन्ने बुद्धी भएका, रातदिन जुवा र तास खेल्ने सुद्धी भएका, जाँड रक्सी धोक्ने र पानसुपारी टोक्ने पतीको लागि नारीको तीज व्रत सार्थकता होला जस्तो लाग्दैन । र पुरुषले नारीलाई हेरिने हेराई परिवर्तन नभएसम्म नारीहरुको तीज व्रतको प्राप्ती शून्यनै हुन्छ । यसप्रतिसबै गम्भिर हुनैपर्छ । यति भनेर तीज पर्व र हिन्दु धर्मको बिरोध गरेकी हैन । यर्थाथ कुरा ओकलेकी मात्र हुं ।